Ny Surface Phone dia hanana sensor amin'ny dian-tànana ... eo amin'ny efijery | Vaovao momba ny gadget
Joaquin Garcia | | Finday, teknolojia
Surface Phone no finday vaovao an'ny Microsoft ary ny ho avy akaiky indrindra amin'ny fizarana finday an'ny Microsoft. Saingy, tato ho ato dia fampahalalana sy tsaho maro no miresaka momba ity maodely finday sy Microsoft hafa ity.
Ny vaovao farany dia ny ampahany amin'ny hearsay ampahany izay mampiavaka azy. Toa izany ny Surface Phone vaovao dia hanana sensor momba ny dian-tànana miseho. Tsy hanana bokotra, na zavatra mitovy amin'izany, hametraka ny rantsan-tànany eo amin'ny efijery ilay mpampiasa ary hivoha izy io.
Ny patanty vaovao ho an'ny sensor fantsom-paritra an-efijery dia mety amin'ny vokatra bebe kokoa ankoatry ny Surface Phone
Ity iray ity vao haingana ny teknolojia dia nahazo patanty an'i Microsoft, izay namoaka ny mombamomba ny mety hampidirina ao amin'ny Surface Phone. Tena tsy manamarina na inona na inona izany ary matetika ny patanty dia tsy manondro na inona na inona, fa raha raisintsika ny kaonty izay nilaza ny tompon'andraikitra Microsoft fa mila izy ireo finday iray tapaka miaraka amin'ny mahazatra sy ny tsy ampoizina, Ny tena marina dia ity sensor sensor an'ny sary eo amin'ny efijery ity dia zavatra tena azo atao, azo atao kokoa raha azo atao noho ny habetsahan'ny RAM izay resahina.
Ary toa izany no ho avin'ny sensor ho an'ny sidina satria Tsy i Microsoft irery no orinasa ao ambadik'ity teknolojia ity. Nandritra ny fotoana elaela, rehefa niresaka momba ny iPhone 7, maro no niresaka momba io haitao io napetraka tamin'ny iPhone. Anisan'ny zavatra hafa satria liana amin'izany i Apple, saingy mbola tsy nandefa zavatra mitovy amin'izany.
Etsy ankilany, Microsoft dia miloka mafy amin'ny fiarovana sy ny Windows Hello, noho izany, na dia tsy mitondra an'io karazana haitao io aza ny Surface Phone, azo antoka fa Mampiditra an'ity haitao ity amin'ny vokatra vokariny i Microsoft, toy ny Surface Pro na Surface Book. Na ahoana na ahoana dia toa izany ny bokotra sensor an'ny sidina malaza dia nisaina ny androny na ho toy izany izy ireo rehefa eny an-tsena ilay sensor momba ny dian-tànana amin'ny efijery Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Ny Surface Phone dia hanana sensor amin'ny tanan-tànana ... eo amin'ny efijery